I-Acciona, yenye yezokhuseleko kunye neyona nto ilungileyo kwezobuchwephesha | Ezezimali
Elinye lamaxabiso esalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, esebenze kakuhle kwiinyanga ezidlulileyo yiAcciona. Yinkampani edwelisiweyo eyeyecandelo le amandla ahlaziyekayo. Enye yezo zinethemba elikhulu lokukhula kwaye eyona nto iyintsebenzo yenxalenye enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngethamo eliphezulu kakhulu lothethathethwano xa kuthelekiswa namanye amaxabiso afanelekileyo kakhulu ezabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo kuzwelonke kwaye oko kukhokelele ekubeni kudlule kwii-maximum zonyaka.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba esi sisindululo sesitokhwe esibonisa imeko yezobuchwephesha engenakulinganiswa. Ukuphuhlisa imeko ecacileyo yokunyuka kwaye enye yezimbalwa ezikhoyo kwiinkampani ezidweliswe kwi-Ibex 35. Ukugqithisa ukuphakama kwakho ngokuthe rhoqo nangona kukho izilungiso ezisengqiqweni kumaxabiso abo ukulungelelanisa nomthetho wonikezelo kunye nebango. Kodwa eyona nto inomdla kuyo yonke into kukuba icandelo elilungileyo labahlalutyi bezemali lijonga ukuba lisenokubaluleka okukhulu kokuhlaziya. Ngokujikeleze iipesenti ezingama-20 kumaxabiso alo angoku nangaphaya kolunye uthotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha.
I-Acciona, kwelinye icala, ibonisa iziphumo zeshishini eziphucula ikota ngekota, ekhuthaza abatyali mali abancinci nabaphakathi ukuba bathenge izabelo. Ngayiphi na imeko, yenye yexabiso lentengiso yesizwe equity esebenze kakuhle kakhulu kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo, ngoxabiso kwizabelo zayo. kufutshane ne-30%. Ukusuka kule ndawo yokujonga, kunokuba kubiza kwaye kunye nokuphakama kokuphakama njengemva kokuthatha isikhundla kweli xabiso liphumayo. Ilungu lelinye lawona macandelo anemfashini okwangoku.
1 I-Acciona: isimilo
2 Ulwabiwo lwesahlulo
3 Iziphumo zamashishini zamva nje
Enye yemiba yeli xabiso likhethekileyo ekufuneka ixatyisiwe kukuba ukungazinzi kwayo kunyukile kwiinyanga ezidlulileyo. Ngenxa yokuwohloka kwezalathiso eziphambili zeemarike zezabelo zelizwekazi elidala. Ukuza kuthi ga ngoku iyekile ukutsala kwayo Kwiinyanga ezidlulileyo kwaye oko kuye kwalungiselela ukulungelelanisa indawo phakathi kwabathengi nabathengisi. Kuba ayinakulityalwa ukuba iAcciona yenye yezokhuselo ekhokelele kwinzuzo yemihla ngemihla yentengiso yaseSpain. Ngokuxabisa malunga ne-2% okanye i-3% kwaye ikhuthaze abatyali mali abaninzi ukuba bathathe izikhundla.
Ngelixa kwelinye icala, uAcciona usebenze ngcono kunamanye amaxabiso yecandelo lezamandla. Ukusebenza njengexabiso elikhuselekileyo ngamaxesha okungazinzi okukhulu kwiimarike ze-equity, njengenye yezona zinto zichaphazelekayo. Kodwa ngoku umbuzo wezigidi zeedola kukuba uza kuqhubeka nale meko ngoku njengoko imarike yestokhwe saseSpain ibonakala ngathi itshintshile. Ubuncinci, ukunyuka kwayo akukho nkqo kwiinyanga ezidlulileyo kwaye ukwandiswa kwemarike yemasheya kuye kwamodareyithwa. Ukusuka kule ndawo yokujonga, kunokuba sele kungene kade ukungena kwizikhundla zakho njengoko umngcipheko wokuwa uphezulu kakhulu.
I-Acciona ibonelela njengenkuthazo yokungena kwabanini zabelo abatsha ukuhanjiswa kwesabelo esisigxina kunye nesiqinisekileyo minyaka le. Ngembuyekezo kulondolozo olulo ngoku kumanqanaba e-5,5%. Ngeentlawulo ezimbini zonyaka neziphethe iakhawunti yabatyali mali. Ayisiyohluli esahlukileyo ngokwenene, kodwa yintlawulo ebisonyuka unyaka nonyaka ide ifike kumanqanaba akhoyo ngoku. Ngomgca weshishini elidala ulindelo olukhulu phakathi kweearhente ezahlukeneyo zezemali kunye nezentengiso.
Kufuneka iqatshelwe ukuba eli xabiso likwindawo ephezulu ngaphandle kokuthandabuza kwaye ngelixa hlonipha inkxaso inokuqhubeka iinyanga okanye iminyaka ezayo. Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba yinkampani ethengisa ngakumbi kulindelo lwayo kwixesha elizayo kunokwezona ziphumo zayo. Kwaye ngenxa yesi sizathu, imisebenzi yakho inokuthwala umngcipheko ngakumbi ukusukela ngoku. Ungalibali malunga nale nto ukuba awufuni kuba nezinto ezothusayo kule minyaka imbalwa izayo. Into enokwenzeka ngemeko yangoku kwiimarike.
Yeyona ngxaki inkulu ukuthatha isikhundla kunye nenjongo kwixesha eliphakathi nelide. Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha eziya kuchazwa kwelinye inqaku. Kwelinye icala, akukho mathandabuzo ukuba kubonakala ngathi bubuxoki ngeli xesha lonyaka, kodwa yenye ye Ixabiso elifanelekileyo le-Ibex 35 kulo msebenzi wangoku. Mhlawumbi ukunciphisa ukhuphiswano olukhulu kwikamva, enokuthi ibe yenye yeenjongo zethu. Ngomgca weshishini elidala ulindelo olukhulu phakathi kweearhente ezahlukeneyo zezemali kunye nezentengiso.
Kwiziphumo zeshishini, iAcciona ifumene itotali 73 million (+ 19,2%) kwikota yokuqala ka-2019. Ukonyuka kubonisa ukukhula kwemali engenayo, efikelele kwi-1.708 yezigidi zeerandi (+ 1,7%), ngokusebenza kakuhle kwamashishini ezamandla (+ 5%) kunye nezixhobo (+ 4,2%) ) kunye nolawulo olulungileyo lwemali yenkampani. Ngelixa kwelinye icala, i-EBITDA ibimi kwi-292 yezigidi ze-euro (-8,8%), ikakhulu ngenxa yotshintsho kumjikelezo owenziwe yinkampani.
U-Acciona wagqiba inkqubo yokwahlulwa kunyaka ophelileyo, ezinye zeempahla zawo (izityalo ze-thermosolar eSpain, Trasmediterránea, Rodovia do Aço eBrazil) zisenegalelo kwikota yokuqala ye-2018. . Kwelinye icala, ingeniso yeqela lakhula laya kwi-1.708 yezigidi zeerandi (+ 1,7%). Amandla anyuse ingeniso yawo yaya kwi-545 yezigidi ze-euro (+ 5%) njengesiphumo samaxabiso aphakamileyo kunye nokwanda kwemveliso yamazwe aphesheya ngenxa yokungena kokusebenza kwezityalo ezitsha. Ukuthengiswa kweziseko zophuhliso kukhule kwaba yi-1.108 yezigidi zeerandi (+ 4,2%), ikakhulu ziqhutywa lulwakhiwo kunye neenkonzo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-Acciona, elinye lamaxabiso kunye nenqaku lobugcisa elifanelekileyo